Dr. Tint Swe's Writings: Sleeping positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လိုအိပ်သင့်သလဲ
Sleeping positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လိုအိပ်သင့်သလဲ
၁။ အသက် ၃၂ နှစ် ကိုယ်ဝန် ၇ လ။ သားဦးကိုယ်ဝန်။ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပက်လက်အိပ်ရင် ကလေး အသက်ရှု မဝဘူး ကလေးအသေမွေးတတ်တယ်ကြားဖူးလို့ပါဆရာ။ ကျမမှာနေ့တိုင်း ခေါင်း မကြည် မလင်ဖြစ်နေတာ အမြဲဘေးစောင်းအိပ်တာနဲ့ ဆိုင်နေလား သိချင်လို့ပါ ဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်။
၂။ အသက် ၃၅ နှစ်ပါဆရာ။ ကိုယ်ဝန်က ၄ လထဲမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အိပ်စက်ရင် ဘယ်လိုအိပ်ရင် သင့်တော်ပါသလဲဆရာ။ တချို့က ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်၊ တချို့က ညာဘက်စောင်းအိပ်ဆိုပြီး ပြောနေကြလို့ပါ။ ကျွန်မကတော့ ညာဘက် စောင်းအိပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီနေ့ facebook မှာတက်လာတာ ပက်လက်အိပ်ခြင်း ညာဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဟာ ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာထက် အန္တရာယ်များတယ်ဆိုလို့ပါ။ ဘယ်ယ်ဟာကို အတည်ပြုရမလဲဆရာ။ ဆရာ့အဖြေကို စောင့်မျော်နေပါ့မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် အိပ်ယာထဲနေရတာကအစ အရင်လိုမဟုတ်ပါ။ အနေရခက်တယ်။ အရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဗိုက်က တနေ့တခြားဖေါင်းလာတာ၊ ခါးနာလာတာ၊ ရင်ပူတာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ အသက်ရှူရခက်တာ စတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အဲလိုဖြစ်စေတယ်။
ကိုယ်ဝန်မှာ အိပ်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးအနေအထာကို SOS (sleep on side) လို့အမှတ်ရလွယ်အောင်ခေါ်တယ်။ တဖက်ဖက်စောင်းအိပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ကိုစောင်းအိပ်တာက အများဆုံးသက်သာနည်းအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ ၁ဝဝ% အဲလိုသာအိပ်ပါလို့ မဆိုလိုပါ။ ကိုယ့်အကောင်းဆုံးအနေအထားကို ကိုယ်တိုင်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ဆန်းတယ်။ တယောက်တည်းမှာ တခါနဲ့တခါ မတူတတ်ပါ။ သူများတွေအဆင်ပြေတဲ့နည့်က ကိုယ့်အတွက် ပြေချင်မှ ပြေမယ်။ စာတွေထဲမှာပါတာနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်ခြင်မှဖြစ်မယ်။ ခြောက်ပြောတာ ရေးတာတွေကို မယုံပါနဲ့၊
သတိပေးချင်တာရှိတယ်။ ပေါင်နဲ့ ဒူးကွေးထားသင့်တယ်။ ကြားထဲမှာ အခုအခံထားတာပိုကောင်းရင် အနေတော်တာ ထားပြီး အိပ်စက်ပါ။ ခါးနာလို့ အခုအခံလိုလည်း သုံးပါ။ ရင်ပူလို့ ဗိုက်ပေါ် ခေါင်းအုံးစတာ တင်လိုလည်းတင်ပါ။ သည်လိုနည်းကို တညလုံးနေရမယ်လည်း မဟုတ်ပါ။ ပြုပြင်လိုတိုင်း ပြုပြင်ပါလေ။
ပက်လက်ဆန့်ဆန့်အိပ်တာက အဆင်မပြေဖြတာများတယ်။ အစာအိမ်က အူတွေပေါ်ဖိနေစေလို့ အစာမကျေတာနဲ့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဗိုက်ထဲကကလေးဟာ အင်မတန်လုံခြုံတဲ့ ရေမြွာအိပ်ထဲမှာနေတယ်။ သွေးကနေလာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ဥပမာ အသည်းရောင် စီ နဲ့ ဘီကလွဲရင် တော်တော်တန်တန်နဲ့ ဘာအန္တရာယ်မှ သူ့ဆီ ရောက်မလာပါ။
ခဏခဏသတိပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ့်မှာမဖြစ်တဲ့ မူမှန်မဟုတ်တာတွေကို မပြောသင့်။ နားမထောင်သင့်။ ဆရာရေးတဲ့ မူမမှန်ကိုယ်ဝန်စာတွေလည်း မဖတ်သင့်ပါ။ အမှားတွေ ခြောက်လှန့်ပြောသူတွေစကား နားမထောင်သင့်ပါ။ အားပေးကူညီဖေးမနေသူတွေနဲ့သာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
Delivery ကလေးမွေးတယ်ဆိုတာ လွယ်လည်းလွယ်၏ ခက်လဲခက်၏
Youtube life-saving videos not reliable
Hitting the wrong target လိုရင်းမရောက်
Artistic writing အလင်္ကာ
အရီး နှင့် အရည်း
Varicose veins သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်း
Hyperthyroidism & Fertility လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းမျ...
Castor oil ကြက်ဆူဆီ
Not Politics ပြင်ရင် မမှားတော့
Siddhārtha Gautama ဗုဒ္ဓဝင်ကို သတ်ပုံမပြင်ပါနှင့်
Mastitis and Breast Abscess နို့နာ
Gastric Juice အစာခြေအရည်
အလျင် နဲ့ အရင်
Paracetamol and Azithromycin ကလေးဆေးများ
Back pain fromaspinal block ခါးထုံဆေးနှင့် ခါးနာ...
Machupo virus in paracetamol
Ankylosing spondylitis အင်ကိုင်လိုဇင်း စပွန်ဒိုင်လ...
Health tourism နိုင်ငံခြားကို ဆေးကုသွားတဲ့ ခေါင်းေ...
Safe Sleep ကလေးငယ်အတွက် စိတ်ချရတဲ့အိပ်စက်ခြင်း
Wrapping babies မွေးကာစကလေးကို အနှီးဝတ်နဲ့ပတ်ခြင်း
A War foraPiece of Land နယ်မြေတခုအတွက် စစ်ပွဲ
Fake Photos ပုံတုတွေ
Hydrocephalus ဦးနှောက်ထဲ အရည်များခြင်း
Sleeping positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ...
Brain Facts ဦးနှောက်၏ ကိန်းဂဏန်းများ
Brain size ဦးနှောက်ကြီးသလား
Out of the EQ and IQ အီးကျူ အိုင်ကျူ ဘောင်အပြင်ကနေ...
Complications of Thyroid Surgery လည်ပင်းကြီးရောဂါ ...
Vaginal odor ဗဂျိုင်းနား အနံ့ဆိုးနေခြင်း
My Writings စာတွေ ဘယ်လိုရေးသလဲ
အသီးအနှံ နဲ့ လောကဓံ
New books ဘုတ်အုပ်သစ်များ
Swallow and Barn swallow မိုးစွေငှက်နဲ့ မိုးစာငှက်
Baby sex အထီး-အမ သိချင်ကြ
The Wall ကန်ထရိုက် လျှောက်လွှာ
Creatinine blood test ခယေရယ်တနင်း စမ်းသပ်နည်း
Fortified biscuits စွမ်းအားမြင့်ဘီစကစ်
Meningitis Links ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါစာများ
ARSA အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ်
Tension headache ကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြ...
Nephrotic syndrome နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ
Cortisone ကော်တီဇုန်းဆေး သတိနဲ့ပေး
Puppet Master ကျိုးနဲ့ ကြိုး
The Other Side မှားတဲ့ဘက်မှာ အင်အားမသေးပါ
Vegetarianism သက်သတ်လွတ် နှင့် ကျန်းမာရေး
Boost Your Metabolism ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးနည်း
Bipolar Disorder စိတ်အခြေနှစ်ခွရောဂါ
Lactose Intolerance လက်တို့စ် နို့လက်မခံနိုင်တဲ့ ဝ...
Unity is bleeding အရေးကြီးပြီ ညီနောင်အပေါင်းတို့
B for ဗမာဗီတာမင်
Sweet Words ဗမာလို ဘိုလို နှုတ်ချိုချို
Venus de Milo ဗီးနပ်စ်ကို လက်သစ်မတပ်ပါနဲ့
Speaking skills စကားပြောနည်း ဆယ်မျိုး
North Korea has fired three short-range ballistic ...
Pregnancy Smile ထပ်ပြင်လိုက်တယ်
Vaccination and Autism ကာကွယ်ဆေးနဲ့ အော်တဇင်
Urinary Tract Infection ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
Terrorist at large ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေသည်
Breast Question ရင်သားမေးခွန်း
Thick Blood သွေးပျစ်ခြင်း
LSCS and Normal labor ဗိုက်ခွဲမွေးတာနဲ့ ရိုးရိုးမေ...
Anemia and Women အမျိုးသမီးနဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါ
Appendicitis treatment with Antibiotics အူအတက်ရောင...
Weight gain လှရုံမက ဝချင်သေးပါလျှင်
Bell's palsy မျက်နှာတခြမ်းလေဖြတ်ခြင်း
သီရိ နဲ့ သိရီ
Spelling Prisoners ဘာသတ်ပုံလဲ
India swine flu death toll rises above 1,000 this ...
City names with articles မြို့နာမည်မှာ အာတီကယ်ထည့်...
Vitamin B complex ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု
Nutrition for women အမျိုးသမီးတွေအတွက်အာဟာရ
Save Bagan ပုဂံကို ကယ်ဆယ်ပါ
Chronic diarrhea နာတာရှည် ဝမ်းပျက်ရောဂါ
Hepatitis B Q and A ဘီပိုး မေးခွန်းများ
Ulcerative colitis အူမကြီးရောင်ခြင်း
MRSA Infection ဆေးယဉ်တဲ့ပိုး
Sky Wine အမိန့်ရထန်းရည်ဆိုင်
ကြေ ကျေ ကြော် ကျော် ကြေး ကျေး ကြယ် ကျယ်
ကွကို ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခြင်း
Reading is the Key ဖတ်နည်း
A gargleaday keeps Gonorrhoea away
This does not impress အဝတ်အစားကပိုကရိုနဲ့